Roy Galán: waa kuma isagu iyo buugaag noocee ah ayuu qoraagan qoray | Suugaanta hadda jirta
Isha sawirka Roy Galán: Elle
Haddii uu jiro mid ka mid ah qorayaasha ugu caansan, shaki la'aan waa Roy Galán. Qoraagan, qoraa, saamaynta ku leh iyo haweeneydu aad ayuu ugu badan yahay isbeddellada. Xitaa waad garan kartaa maxaa yeelay waxaad wax ka akhrisay ama wax ka aragtay baraha bulshada ama xitaa telefishanka.
Laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa kiiska oo aadan aqoon isaga, taasna waxaan isku dayeynaa inaan dib kuu tirino waa kuma Roy Galán, sida uu wax u qoro iyo buugaagta uu qoray. Ma bilaabi karnaa?
1 Waa kuma Roy Galán
1.1 Billowga shaqadaada
1.2 Roy Galán oo ah haweeney
2 Buugaagta Roy Galán
Waa kuma Roy Galán
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ka ogaato Roy Galán waa in, dhab ahaantii, isagu aanu ahayn magaciisa rasmiga ah. Ku Magaca qoraagan oo buuxa waa Roy Fernández Galán. Si kastaba ha noqotee, wuxuu ku wareejiyay magaciisa koowaad si uu mudnaanta u siiyo kan labaad. Sidaa darteed, waxaa loo soo bandhigay sida oo kale.
Wuxuu ku dhashay bishii Diseembar 22, 1980 Santiago de Compostela laakiin, inkasta oo uu ku dhashay Galicia, runtu waxay tahay in inta badan carruurnimadiisii ​​uusan ku qaadan halkaas, laakiin halkii uu ku joogay Canary Islands. Sidoo kale, qoyskeedu runti maahan qoyskaaga caadiga ah; Waxay ka soo jeedaa qoys isku jinsi ah waxayna si dhakhso leh ula kulantay luminta mid ka mid ah hooyadeed, Sol, oo dhimatay iyada oo kaliya 13 sano jir. Sidaa darteed, wuxuu la joogay hooyadiis kale, Rosa.
Sidoo kale, waa inaad ka ogaataa qoraagan inuu leeyahay mataano mataano ah, Noa Galán.
Heer waxbarasho, Roy Galán wuxuu bartay Sharciga Jaamacadda La Laguna wuxuuna qalin jabiyay 2003. Muddo 11 sano ah wuxuu ka shaqeynayey maamulka Dowlada Madrid laakiin, sanadkii 2013, dhibka qoraalka ayaa ku dhacay waxuuna bilaabay inuu si buuxda naftiisa ugu huro shaqadan.
Intaa waxaa dheer, in 2017 uu ku jiray liistada Íñigo Errejón ee Golaha Muwaadiniinta ee Podemos, iyo 2019 liiska More Madrid ee Golaha Magaalada Madrid oo uu weheliyo Manuela Carmena.
Roy Galán ma aha nin diirada saaray buugaagta. Waxay leedahay wajiyo badan. Midka ugu weyna waa kan qoraa. Waxaa la ogyahay inuu arday ka ahaa Iskuulka Canarian ee Hal abuurka Suugaanta ee aqoon isweydaarsiyada ku saabsan sheekooyinka, gabayada, sheekooyinka gaagaaban, shaashadaha, falanqaynta filimada ... iyo sidoo kale koorsooyin ku saabsan Abuurista Suugaanta, Xoreynta Kheyraadka Muuqaalka ah ama xitaa Qoraaga Vademecum .
Wuxuu aad uga dhex muuqday iskuulka xitaa wuxuu baray koorsooyin mowduucyo kaladuwan laftiisa.
Markii ugu horreysay ee uu daabaco buug waxay ahayd seddex sano kadib markuu diirada saaray qorista, oo aan dib looga hadli karin. Si kastaba ha noqotee, waa la ogyahay in, Iskuulka Canarian ee Abuurista Suugaanta, uu ku qoray sheekooyin taxane ah riwaayadda «Oo sidaasay ahaan doontaa weligeed», oo ay weheliyaan asxaabta kale.
Sannadkii 2019 wuxuu ka helay Abaalmarinta Krámpack Abaalmarinta 'Extremadura International LGBT Festival'.
Isaga laftiisu wuxuu ku qeexaa habka wax loo qoro "mid fudud", iyadoo aan loo eegin xaqiiqda ah in la helo qoraalkaas dadka gaadha inay gudaha ka muujiyaan shaki iyo isku dhac wuxuu u baahday tababar wanaagsan oo uu ku sameeyo. Isaguba wuxuu kamid yahay qorayaasha iskudhafka qoraalka iyo siyaasada, tixgalinaya taas qoraalku waa "taariikh siyaasadeed."
Marka laga soo tago shaqadiisa qoraa ahaan, sidoo kale waa qoraa. Xaqiiqdii, wuxuu lashaqeeyaa majaladda BodyMente, wargeyska dhijitaalka ah Muuqaalka guud iyo xitaa wuxuu heystaa waqti uu kaga qaybgalo websaydhka LaSexta.
2013, markii uu go'aansaday inuu naftiisa u huro qorista, Roy Galán wuxuu sameeyay degel Facebook ah. Waxay ahayd shaqadeeda inay dhamayso koorso Maareeyaha Beesha ah waxayna bilawday inay wax ku qorto. Wax uusan isagu joojin sameynta, kaliya maahan Facebook, laakiin sidoo kale Twitter iyo Instagram. Waana inaad ogaataa in wax kasta oo uu qoro ay arkeen lana wadaagaan kumanaan dad ah, sidaa darteed wuxuu noqday saameyn wax ku ool ah.
Roy Galán oo ah haweeney
Sababta kale ee Roy Galán loo yaqaan waa isaga bayaanka dadweynaha, iyo sidoo kale xulafad haween. Waa in maskaxda lagu hayaa in buugaagteeda ay kaga hadlayso dumarnimada, sidoo kale baraha bulshada iyo maqaallada ay ku daabacdo warbaahinta.
Xaqiiqdii, wuxuu kaqeyb qaatay buuga ay qortay Nuria Coronado, Ragga loo sinaado isagoo kamid ah raga la wareystay.
Buugaagta Roy Galán
Isaga oo diiradda saaraya wejigiisa suugaanta, Roy Galán wuxuu buugag badan ku leeyahay suuqa. Kii ugu horreeyay, ee aan la aqbali karin, waxaa lagu daabacay 2016 iyada oo loo daabacayo guriga daabacaada ee Alfaguara. Si kastaba ha noqotee, ma ahayn kii ugu dambeeyay ee iyaga ka mid ah, laakiin wax badan oo kale ayuu leeyahay.
Como buugaag u gaar ah waxay leedahay:
Lama sheegi karo.
Ma jiro qof gudahaaga ah.
Ha uga dhigin mid u eg jacayl.
Intooda badan intooda badan waxaa lagu qoray guriga daabacaada ee Alfaguara, marka laga reebo Ka dhig mid aan u muuqan jacayl iyo Las alegrías oo ku sameeyay Ink Cloud iyo Continta, siday u kala horreeyaan. Intaas waxaa sii dheer, iyaguna waa kuwa kaliya ee uu daabacay isla sanadkaas tan iyo inta badan wuxuu soo saaraa buug cusub oo keliya hal jeer sanadkiiba.
Marka lagu daro buugaagta uu qoray, wuxuu sidoo kale wuxuu ku daabacay shaqooyin iskaashi, sida ay yihiin:
(h) jacayl 3 xaasidnimo iyo dambi.
(h) 4 is jeclaansho.
Ma iloobi doono buuggii uu la soo saaray Dugsiga Canary Islands ee Hal-abuurka Suugaanta, «Oo sidaas ayay weligeed ahaan doontaa».
Hadda oo aad waxbadan ka garaneyso Roy Galán, maku dhiirraysaa buugaagtiisa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Qorayaasha » Roy Galán
Sida biyaha Shukulaatada